Iterable: Sehatra fivarotana fitomboana an-tsena | Martech Zone
Zoma, Septambra 13, 2019 Zoma, Septambra 13, 2019 Douglas Karr
Iterable dia sehatry ny varotra fitomboana izay ahafahan'ny marika mamorona, manatanteraka ary manatsara ny fampielezana ny lakroa. Marika mitarika, toa ny Zillow, SeatGeek, ary Box, misafidy Iterable hampatanjaka ny fifandraisan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainan'ny fiainana manontolo miaraka amin'ny tolo-kevitra momba ny atiny sy ny fitoviana data tsy manam-paharoa.
Fifandraisana amin'ny mpanjifa Cross-Channel
Ny traikefan'ny mpanjifa manerantany dia manomboka amin'ny singa fototra dimy amin'ny fahombiazan'ny varotra fitomboana: ny famantarana ny mpihaino, ny fampidirana angon-drakitra malefaka, ny fananganana fampielezan-kevitra mandritra ny androm-piainana, ny toetrany mifototra amin'ny fitondran-tena ary ny fanatsarana ny fahaiza-manao.
Fizarana mpihaino tsy azo ihodivirana
Fantaro ny mampiavaka ny mpanjifa sy ny safidiny manokana amin'ny alàlan'ny fitahirizana saha data ny hetsika demografika sy fomba amam-panao isaky ny mombamomba ny mpampiasa. Zarao amin'ny fomba mavitrika ireo mpamandrika ho an'ny fampielezan-kevitra tena kendrena, avy eo mamorona mpijery mitovy endrika ary avereno mpampiasa ao amin'ny media sosialy.
Araraoty ny angona rehetra momba ny demografika, ny fitondran-tena ary ny hetsika ataon'ny mpanjifanao — na anatiny na avy amin'ny antoko fahatelo — amin'ny fotoana tena izy mba handrisihana fandefasana hafatra manokana sy fampielezan-kevitra.
Ny maodelin'ny angon-drakitra Iterable, API maoderina ary webhook manerantany dia mamerina vaovao avy amin'ny loharano rehetra amin'ny ambaratonga tsy misy fetra.
Fampiroboroboana ny fampielezan-kevitra mandritra ny androm-piainany
Mamolavola fanentanana ara-barotra be pitsiny, ary mitarika fandefasana hafatra mifandraika amin'ny mailaka, push mobile, SMS, in-app, push web, mail direct, retargeting sosialy sy maro hafa.
Ny Workflow Studio an'ny dragter-and-drop an'i Iterable dia mamela anao manampy sivana, fanemorana ny fandaharam-potoana, mandeha ho azy ny trigger ary mampihetsika ny hafatra amin'ny sehatra tokana
Fanambarana mifototra amin'ny fitondran-tena mety
Hanamora ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjifa tsirairay amin'ny alàlan'ny famoronana fandefasan-kafatra kendrena tena tokana amin'izy ireo, amin'izany fotoana izany, na aiza na aiza misy azy ireo.
Manamboara atiny manokana sy mavitrika miaraka amina mpamorona modely mora ampiasaina Iterable, lojika mandroso eo an-tanan-tohatra, fahan-tahiry ary sombin-tsoratra mahazatra.
Fampahafantarana ny votoatin'ny katalaogy Iterable
Ny katalaogy dia motera fananganana metadata entin'ny metadata. Miaraka amin'ny Catalog Iterable, ireo mpivarotra dia afaka mamorona traikefa amin'ny fandefasana hafatra manokana avy amin'ny antontan-taratasin'ny mpanjifa voalohany — ny zava-drehetra dia manomboka amin'ny antsipirian'ny mombamomba azy manokana ary hatramin'ny safidin'ny fitondran-tena tsinontsinoavina. Ny Catalog dia mampihetsika ny sanganasa feno momba ny marketing, ahafahan'ny mpivarotra mamorona traikefa ara-barotra mavitrika azo ampiharina amin'ny sehatra database an'ny mpanjifa.
Talohan'ny nampiasana Katalaogy, ny fampiharana anay dia voafetra tamin'ny fanomezana generic tampon'ny 5 lisitry ny tobin'ny toby isaky ny fanjakana ho tolo-kevitra. Tsy afaka nanolo-kevitra an-dàlambe ny tobim-pilasiana ho an'ireo mpampiasa miorina amin'ny mombamomba azy ireo izahay. Taorian'ny fampiharana ny Katalaogy, ny paikadim-barotra rehetra dia niova ho filalaovana mpanao lalao toby tsirairay miaraka amin'ireo mpampiasa anay — mampifandray ny elanelana misy eo amin'ny toby sy ny toby. Afaka nisaraka tamin'ny fomba tsy fahita hatrizay izahay. Tsy vitan'ny hoe afaka nampitombo ny fahafahanay manome torolàlana momba ny tobin'ny toby izahay, fa manome ihany koa ny tobin'ny toby natokana ho an'ny mpampiasa tsirairay.
Anthony Easton, Lehiben'ny fampandrosoana ny mpihaino ao amin'ny Ilay Dyrt
Fanamafisana ny fahaiza-manao azo atao
Iterable Insights dia natao hanampiana anao hahita sary an-tsaina ny fampielezan-kevitrao, hanaraka ny zava-bitanao ary hamerina haingana. Misafidiana karazana tabilao maromaro, manomeza lisitry ny fampielezan-kevitra ary ampitomboina ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny tatitra manokana sy dashboard.
Ny fanandramana dia manatsara ny refin'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanandramana A / B matanjaka sy ireo fanandramana marobe izay misafidy ho azy ny atiny mandresy hanamafisana ny fisokafana, tsindry ary fanovana.
Manomàna fampisehoana tsy azo lavina
Famaritana: Amboary Audio amin'ny alàlan'ny transcript